5 အကျိုးစီးပွားအစက်အပြောက်ကိုသင်တောင်အာဖရိကမှာတော့အကြောင်းသိနိုင်မှာမဟုတ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ >5အကျိုးစီးပွားအစက်အပြောက်ကိုသင်တောင်အာဖရိကမှာတော့အကြောင်းသိနိုင်မှာမဟုတ်
တောင်အာဖရိကစိတ်လှုပ်ရှားတစ်ပြည်, မတူကွဲပြားမှု, နှင့်ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှု. ထိုသို့အနီးကပ်မှခန့်မှန်း 10.3 သန်းဧည့်သည်တောင်အာဖရိကမှတစ်ဦးတည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကခရီးထွက်, နှင့်ဤအရှိဆုံးဖွယ်ရှိဒီနှစ်ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာလှပသောရှုခင်း၏နေရာတစ်နေရာရဲ့, အရေးကြီးသောသမိုင်း, အံ့သြစရာအစားအသောက်များ, နှင့်အရာတခုကိုများစွာသောတစ်တိုးရစ်အဖြစ်မြင်လုပ်ဖို့.
သင်ဤမယုံနိုင်စရာတိုင်းပြည်သွားရောက်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းလုပ်ဖို့လည်းမရှိသောအရာကိုသိရန်လိုခငျြ. အကောင်းဆုံးကိုရှိခြင်းအတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားကြောင်းအရာဝန်ရှိပါတယ် အတှေ့အကွုံ, ဤမျှလောက်များစွာသောစည်ကားရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်အဖြစ် ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု, သို့သော်အနည်းငယ်ရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းပယ်သွားကြဖို့တစ်ခါတစ်ရံကောင်းတဲ့င်. ဤရွေ့ကားသင်တို့နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်မဖွစျစခွေငျးငှါတောင်အာဖရိကအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအစက်အပြောက်များငါးများမှာ.
1. Tembe ဆင်ပန်းခြံ
တစ်ဦး Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်းစွန့်စားမှုအဘို့အတောင်အာဖရိကမှဦးတည်လူအများစုဟာအများဆုံးဖွယ်ရှိ Kruger သွားရှာနေပါလိမ့်မည် အမျိုးသားဥယျာဉ်. ထိုသို့အရေးအပါဆုံးတဦးရဲ့သံသယရှိစရာမလိုပါင်, တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်လှပသောသောနေရာများ. ဒါပေမဲ့, တောင်အာဖရိကကမ်းလှမ်းမှု ဤမျှလောက်များစွာသောထူးခြားရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်းအတွေ့အကြုံများ, နှင့် Tembe ဆင်ဖို့ဦးတည် ပန်းခြံ တက်နီးကပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆင်မြင်နေရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်!
2. ခရီးစဉ် 72
ခရီးစဉ် 72 အရှေ့ကိပ်အပေါ်တည်ရှိပြီးနှင့်အရှေ့လန်ဒန်နှင့်အတူဆိပ်ကမ်းအဲလစ်ဇဘက်ခ်သောကမ်းရိုးတန်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအများဆုံးပါတဦးရဲ့ မောင်းနှင်မှု တောင်အာဖရိက၏မြေတပြင်လုံးအတွက်လမ်းကြောင်းများ, နှင့်ကျိန်းသေတစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်သင့်. တစ်ဦးကိုမြင်သောအရာတို့ကိုတွေအများကြီးနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအပေါ်အတှေ့အကွုံရှိပါတယ် - တတ်နိုင်သမျှထဲမှာအားလုံးယူရန်ကြိုးစား. သငျသညျသငျနှငျ့အတူသင့်ကင်မရာတလျှောက်ဆောင်ကြဉ်းသေချာအောင်လုပ်ပါ, လွန်း!
3. က Pretoria
က Pretoria ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, တောင်အာဖရိကရဲ့ Gauteng ပြည်နယ်မှာ underrated မြို့. ဒီနေရာမှာလေ့လာစူးစမ်းဖို့အများကြီးရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောပြည်ထောင်စုအဆောက်အဦးများအဖြစ်, ဘုရားကျောင်းရင်ပြင်မှာ, နှင့်က Pretoria တိရစ္ဆာန်ရုံ.
သို့သျောလညျး, က Pretoria အကြောင်းကိုအများဆုံးအထင်ကြီးအစိတ်အပိုင်းများတွင်တပါးက Pretoria ကိပ်တောင်းမှရထားခရီးဖြစ်ပါသည်. ထိုသို့ပြေး 1,600 ကီလိုမီတာနှင့်အတတ် 27 ဖြည့်စွက်ဖို့နာရီ - နှင့်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုသင်အထင်ကရအပြာရောင်ရထားကုမ္ပဏီအပေါ်ခရီးသွားလာရခြင်းဖြစ်သည်. သူတို့ရဲ့အတားအဆီးတွေ Bleu menu ကိုအတူ, ကုမ္ပဏီ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအကောင်းဆုံးရထားအစားအစာများအချို့ကမ်းလှမ်း. ဒါကရိုက်နှက်ချွတ်အဆုံးစွန်ဖြစ်ပါတယ် (ရထားလမ်း) သင်တစ်ဦးလုံးဝအသစ်သောအလငျး၌တောင်အာဖရိကတွေ့မြင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုလမ်းကြောင်းအတွေ့အကြုံကို.
4. Amatola တောင်တန်း
အဆိုပါ Amatola တောင်တန်းတောင်အာဖရိက၏မြေတပြင်လုံးအတွက်အများဆုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အစက်အပြောက်များထဲမှရှိနေဆဲ. တောင်ပေါ်မှာအလတ်စားဒီသေးငယ်တဲ့မြို့တစ်လုံးဝသစ်ကိုဤလောကသို့နင်းနဲ့တူကြောင်းအတွက်ယူဤမျှလောက်ဖြင့်သဘာဝအလှတရားရှိတယ်.
လုပ်ဖို့အမှုအရာတွေအများကြီးကဒီမှာရှိပါတယ်, ကဲ့သို့ လမ်းကြောင်းတောင်တက်နှင့်လမ်းလျှောက်. Amatola သစ်တော Hogsback အတွက် J.R.R ထံမှ Mirkwood များအတွက်လှုံ့ဆော်မှုပါပြီမှအခိုင်အမာဖြစ်ပါတယ်. စာရေးသူ JRR Tolkien ရဲ့ကောင်းချီးသားသမီးရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဂန္အဆိုပါ Hobbit! ဒါကတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားများအတွက်စုံလင်သောအတွေ့အကြုံ, စုံတွဲများ, နှင့်မိသားစုများရောနှော. အဘယ်သူသည် Mirkwood မှတဆင့်ခရီးစဉ်မှာချင်မှာမဟုတ်ဘူး?
5. Sun ကစီးတီး Resort ကို
Sun ကစီးတီး Resort ကိုဒေသတွင်းပျော်ရွှင်မှု၏နိုငျငံတျောအဖြစ်လူသိများသည်နှင့် Joburg ကနေ Two-နာရီ drive ကိုနှင့်အတူရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်. ဤ ဇိမ်ခံ အပန်းဖြေစခန်းနှင့်လောင်းကစားရုံသူတို့ရဲ့တောင်အာဖရိကစွန့်စားမှုနှင့်အတူခမ်းနားထည်ဝါတဲ့နည်းနည်းရှာနေသူဘယ်သူ့ကိုမှအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အချို့သောချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟိုတယ်များကဒီမှာရှိပါတယ်, အဖြစ်နှစ်ခုဆုရဂေါက်ကွင်း, နှင့် 7000-ခိုင်မာတဲ့မိကျောင်းသန့်ရှင်းရာဌာန.
သင်မြင်သည့်အတိုင်း, အားလုံးတောင်အာဖရိကတစ်လွှားခဲ့ခံရဖို့အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံများများများရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်များစွာသောလူပိုကောင်း-လူသိများအစိတ်အပိုင်းများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု, ဒါပေမဲ့အဲဒီအများဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောတချို့ရှိနေပါတယ်. သင်သည်မည်သည့်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့လွဲချော်င့်, မှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမျဉ်း drop ကျေးဇူးပြုပြီး.
မှာကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး Saveatrain.com သငျသညျအစဉျအမွဲရထားလက်မှတ်တွေလိုအပ်မယ်ဆိုရင်.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-spots-of-interest-you-may-not-know-about-in-south-africa/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml သင် / ru အတွက် / သို့မဟုတ် / TR နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#တောင်အာဖရိက အားလပ်ရက်များ ခရီးသွား
စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအိုင်ဗီဟာသူ့အစ်ကိုတွေနဲ့အတူစခန်းချခြင်းနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်. ဤသည်တနင်္ဂနွေခရီးစဉ်များအတွက်သူမ၏စိတ်အားထက်သန်မှုစတင်ခဲ့သည်. သူမသည်လက်ရှိတွင်သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများဖြင့်မဟာဘွဲ့ကိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီးခရီးသွားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်လိုလားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်အချို့အတွက်အချိန်ပိုင်းအလွတ်စာရေးဆရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။. သူမသည်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်မြောက်အမေရိကသို့လှည့်လည်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်းဥရောပနှင့်အာရှနိုင်ငံများသို့သွားရောက်ခဲ့သည်. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
မီးရထားခရီးသွားလာသြစတြီးယား, မီးရထားခရီးသွားလာဗြိတိန်နိုင်ငံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာဂျာမဏီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, မီးရထားခရီးသွားလာစပိန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ, မီးရထားခရီးသွားလာဗြိတိန်, ဥရောပခရီးသွား